डा.केसीले फेरि किन बोलाए पत्रकार सम्मेलन ?
मंगलबार, २२ साउन, २०७५
काठमाडौं । अनशन तोडेर १३ दिनअघि अस्पताल भर्ना भएका डा. गोविन्द केसी आज डिस्चार्ज हुँदैछन् । ६ दिन लामो आसीयूको बसार्इ र एक साता अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएका डा. केसीको स्वास्थ्यमा पूर्ण सुधार आएपछि आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन लागेका हुन् ।
सम्झौता भएको १३ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले मन्त्रिपषिद् बैठकबाट सम्झौता अनुमोदन गरेको छैन । १३ दिनसम्म सरकारले सम्झौताअनुसार कार्य नगरेको भन्दै डा. केसीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएलगत्तै यस विषयमा जानकारी गराउन आज दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन् ।
डा. केसीले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज स्थपना गर्न नहुने र चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सहितका विभिन्न मागसहित अनशन बसेका थिए ।
२७ दिन लामो अनशन बसेका डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै सरकारले लिखित सहमति गरेपछि उनले साउन १० गते राति अनशन तोडेका थिए ।